HIVE: Altenum Hondo Dzinoburitswa uye Kuuya kweLinux | Linux Vakapindwa muropa
HIVE: Altenum Hondo 2.5D Yakave yakaburitswa uye chakanakisa chinhu ndechekuti ichauyawo kune iyo GNU / Linux. Naizvozvo, nhau huru kune vashandisi veiyi sisitimu inoshanda, avo mushure mekuuya kweMac uye Windows vhezheni tinotarisira kuti tichavawo nayo nesu nekukurumidza sezvazviri mumazita emitambo yemavhidhiyo yazvino. Kutenda nebasa reCatness Game Studio, zita racho rinogona kutengwa kubva zvino kuchitoro cheStam, kana iwe uchifarira. Unogona kuitenga ne € 9,99 kana iyo yakaenzana madhora kana ukativerenga kubva kuNorth America (iwe unoziva ... nekuda kweiyo mania yekuita mari kuchinjisa zvakafanana kune zvinofungidzirwa kuti zvinodhura zvine zvigadzirwa zvetekinoroji pazvinofanira kuendeswa kunze. kuenda kuEurope ... asi muchigadzirwa chinotakurika handizive kuti nei).
Zviripachena zveLinux haisati yavapo, asi timu diki inoshanda ye Catness mutambo studios inoramba ichishanda kushandura izvi uye kuti munguva pfupi tichava nazvo zvakare. Chikwata chakaumbwa nevagadziri vaviri chete parizvino, uye vari kuronga kuifambisa vachishandisa Unreal Injini 4. Ndinovimba ichakurumidza kuuya uye nekuuya nemabhugi avakawana Mac nePS4 izvo zviripo yakagadzika wobva watanga nayo.Linux port, uchidzidza kubva kune aya mhosho ...
Kana iwe usina kujairana neHIVE: Altinum Hondo, iyi iri chiitiko chevhidhiyo mutambo mujecha rine mativi mana. Aya anonzi Hexadiums, uye pachave nevatambi vatanhatu vane mhando dzakasiyana dzegiravhiti. Ehezve ine yakawanda multiplayer uye yekupfura-yakatarisana modhi, iine modhi umo vanopfuura gumi vatambi vanogona kutambidzwa, pane avo vaviri chete vanogona kuramba vari vapenyu. Nekugadzirisa, kurwa uye kupona iwe unozadzisa chinangwa chako. Asi pane izvo iwe uchafanirwa kuve wakangwara, hunyanzvi, nekukurumidza uye unouraya pamusoro pevavengi vako, zvikasadaro nyajambwa anenge ari iwe.
Iwo mahexagoni akapatsanurwa kuita matunhu matanhatu ane giravhiti inotungamirwa mune yega yega, nematambudziko aya uchafanira kurwira kuti uve gamba mupfura uyu. Iwe unogona kuve nezvombo zvetsika uye kugona, uine zvinopfuura zvitanhatu zvombo zvakasiyana kune wega mutambi kusarudza kubva. Uye zvakare, inotungamirwa kune chimwe chinhu chine fashoni seE-Nhabvu iri kuwana mukurumbira, kwete chete kubva kune vatambi, asiwo kubva kune vezvenhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » HIVE: Altenum Hondo Dzinoburitswa uye Kuuya kweLinux
KDE Neon ichagadziriswa kuUbuntu 18.04 kune vashandisi vayo